Fifidianana solombavambahoaka :: Raikitra ny fampitahana ireo vokatra ataon’ny CENI • AoRaha
Fifidianana solombavambahoaka Raikitra ny fampitahana ireo vokatra ataon’ny CENI
Mandeha ny fanamarinana. Eo am-panaovana ny fampitahana an’ireo antontan-kevitra mirakitra ny voka-pifidianana ao aminy
sy ny avy amin’ireo kandidà ny Vaomieram-pirenenamahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), nanomboka omaly. «Fari-pifidianana miisa dimy ambin’ny folo no nangataka ny hanaovana ny fampitahana an’ireo antontan-kevitra ireo hatreto. Ny valo tamin’izy ireo no nekena ary efa nisy ny fanamarinana notanterahina nanomboka anio (Ndlr ; omaly). Mbola hitohy ny fandraisana an’ireo fangatahana sy ny fampitahana», hoy Rakotondrazaka Fano, mpampaka-tenin’ny Ceni.
Nisantarana izany ny fanamarinana ny vokatra tao amin’ny distrikan’i Soalala, Amparafaravola, Mahajanga faharoa, Arivonimamo, Ambo­hidratrimo… « Tao amin’ny distrikan’i Soalala no nahitana fahasamihafana ny vokatra tao amina birao fandatsaham-bato miisa roa. Iray kosa no nisiana tsy fitoviana tany Arivonimamo. Tsy dia misy olana loatra aloha ny fampitahana natao. Anjaran’ny Ceni no manitsy an’izay diso», hoy ny fanam­pim-panazavana.
Miteraka resabe sy fifa­maliana eo amin’ireo samy kandidà depiote momba ny fisiana lesoka teo amin’ny fikirakirana ny voka-pifidia­nana vonjimaika eny amin’ny Ceni izao. Maro ny fanehoan-kevitra nataon’ireo samy kandidà depiote, izay mifa­mpia­mpanga ho nanao hosoka tamin’ny latsa-bato natao tamin’ny 27 mey 2019. Noho izany antony izany no nanaingan’ny Ceni hatrany an’ireo kandidà mba hifanaja sy hitondra ny porofo mazava eo am-pelan-tanan’ izy ireo avy mba hahafahana manao ny fanamarinana
rehetra. Naverin-dRakotondrazaka Fano nohazavaina hatrany fa: «ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) irery no manam-pahefana hitsara sy hamoaka didy mika­sika an’ireo fifa­nolanana momba ny fifidianana. Manao ny tatitra rehetra fotsiny ihany no andraikitry ny Ceni», hoy izy.
CAN 2019 :: Voailika tsy ho any Maraoka sy Ejypta i Ando sy Toby